24K သည် 48K 60K ကြမ်းပြင် - ရပ်နေတဲ့ AC - Foshan Blueway လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ, Ltd.
Blueway Floor-standing Air Conditioner blends in perfectly with the surrounding decor, clean and fresh air conditioning is ensured withahigh level of cooling performance and air purifying operation, which is commonly used in places such as restaurants, halls, motels, data centers, စသည်တို့.
အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့် R ကိုအတူ&capacity စွမ်းရည်, Blueway သည် ကျော်ကျော်ကို ရယူထားသည်။ 20 မူပိုင်ခွင့်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ထိပ်တန်း HVAC ထုတ်လုပ်သူ ဖြစ်လာသည်။. ဗကသ, 70% Blueway ထုတ်ကုန်များပြည်ပဈေးကွက်သို့တင်ပို့ရောင်းချ, သြစတြေးလျအပါအဝငျ, ဥရောပ, မြောက်အမေရိက, အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ, တောင်အာဖရိက, တောင်အမေရိကနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အသိအမှတ်ပြုမှု ရရှိထားသည်။. ထို့အပြင်, ပြီးသွားပြီ 20 တရုတ်ပြည်မတူညီသောမြို့ကြီးများတွင်ကိုယ်စားပြုရုံးများရှိသည်, ထို့အပြင်ဥရောပ၌၎င်း၏ခွင့်ပြုချက်ဖြန့်ဖြူးရှိပါတယ်, အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ, မြောက်အမေရိကနှင့်တောင်အမေရိက.
သ, Blueway ပြီးပြီ 10000 ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုနှင့်အတူအင်ဂျင်နီယာဖြေရှင်းချက်. နောက်ထပ်ဘာတွေလဲ။, Blueway သည်တရုတ်စျေးကွက်ရှိ Hilton Hotel မှထောက်ခံသည့်အမှတ်တံဆိပ်လည်းဖြစ်သည်. Blueway သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမိတ်ဖက်များအားအမြင့်မားဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဆန်းသစ်သောထုတ်ကုန်များကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏ကြိုးပမ်းမှုများနှင့်ကတိက ၀ တ်များကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်. မေး: Any product appearance option?
က: Simple pipe connection and wiring operation can be completed on the ground. The installation process is simple, efficient, short installation time and ensures installation quality.
မေး: How about the working performance?
က: Super air capacity can realize strong refrigeration and heating, dustproof design, air guide bar is closed after stop.
မေး: How about the air supply feeling?
က: A wide angle 180°of uniform air supply, the outlet with wide and high efficiency centrifugal fan design, can long-distance air supply, double environmental comfort.
မေး: ဘယ် refrigerant အမျိုးအစားကို သုံးမလဲ။?
က: ဟုတ်ကဲ့, စံအတိုင်း အဝေးထိန်းကိရိယာ.
မေး: Hong long က warranty time ပါ။?
က: 1 ယူနစ်တစ်ခုလုံးအတွက် တစ်နှစ်,3compressor အတွက် နှစ်၊.
မေး: What’s the delivery time?
က: It depends on the PMC and production plan.